China 30g 50g 100g 250g 500g ezingenalutho 8oz caviar amathini amathini ngerabha band ifektri abakhiqizi | E-Byland
30g 50g 100g 250g 500g ezingenalutho 8oz caviar amathini amathini ngebhande iraba
Incazelo: I-tin evulekile ye-caviar can can, Umshini we-caviar tin box, Amathini angenalutho we-caviar
Usayizi: Ububanzi nokuphakama kungashintshwa njengesicelo sakho.
Ukusetshenziswa: ukupakisha kwe-caviar njll.
Izinto zokwakha: I-0.23mm tinplate ewugqinsi, ukujiya okuhlukile kuyatholakala.
I-tin evulekile ye-caviar can can, Umshini we-caviar tin box, Amathini angenalutho we-caviar
Ububanzi nokuphakama kungashintshwa njengesicelo sakho.
ukupakisha kwe-caviar njll.
I-0.23mm tinplate ewugqinsi, ukujiya okuhlukile kuyatholakala.
Ngaphezu kwezinkulungwane zesikhunta.
Idizayini eyenziwe ngokwezifiso.
1 ucezu / isikhwama se-PP, ezinye izingcezu / ibhokisi langaphandle.(Ishalofu leqanda, ngaphakathi kulungile uma udinga)
1. Ukwakhiwa kweKhasimende nezidingo kuyaqondakala.
2. Ukuma nosayizi wethin isiqinisekiso.
3. Ukuqedwa kokuqamba.
4.Umsebenzi wobuciko wokuphrinta wesampula.
5. Okuprintiwe isampula isiqinisekiso.
6. Ukuhlelwa kokukhiqiza.
Sisebenza ngokukhethekile ekwenzeni amabhokisi ezipho zethini, amabhokisi weti yetiye, amabhokisi amathini amakhekhe, amabhokisi omkhiqizo wezokunakekelwa kwempilo, amabhokisi amathini emithi, amabhokisi wethini wenyanga, nolunye uchungechunge lukathayela lokupakisha kwensimbi.
1. Q: Ngidinga i-i-caviar tin mude nje / mkhulu kunosayizi wesitoko sakho. Ingabe lokhu kulula ukukwenza?
IMP: Ngokuya ngokwakhiwa kwethini singakushintsha ukuphakama kwamathini amaningi ayindilinga noma amahle ngokulula ngamathuluzi akhona we-oda langokwezifiso. Amathini angenamthungo noma adwetshiwe azodinga i-tooling entsha yanoma yikuphi ukulungiswa kosayizi. Sihlala sakha izinto ezintsha futhi sitshala imali kubuchwepheshe bamuva obuzohlinzeka ngezinketho eziningi kumakhasimende ethu.
2. Q: Siyini isikhathi sakho esivamile sokuhola ngokwesiko caviar ithini?
A: ama-3-5weeks ane-tooling ekhona nomsebenzi wakho wobuciko. Ngazo zonke izinqubo ezingaphansi kophahla olulodwa kusuka kumqondo kuya ekuqedeni, singanikeza ukulawula kanye nokuguquguquka kanye nokulethwa okufika ngesikhathi kumakhasimende ethu.
3. Q: Kufanele ngi-oda kusenesikhathi kangakanani ukuze ngiqiniseke ukuthi ngizoyithola i-Custom yamicaviar Amathini ngesikhathi samaholide?
IMP: Sikukhuthaza ukuthi uhlele kusenesikhathi ngangokunokwenzeka. Ukuxhumana kuyisihluthulelo! Uma kunemikhawulo ebekiwe edinga ukuhlangatshezwa nge-oda langokwezifiso, yazisa omele abathengisi bethu ukuthi abeke isikhathi sini. Singabuyela emuva kusukela osukwini lokulethwa futhi sinikeze umugqa wesikhathi wokuthola i-oda lokuthenga, umsebenzi wobuciko nokuvunywa kobufakazi. Njengawo wonke amaphrojekthi wangokwezifiso, izinguquko zingabambezela ukuthunyelwa kokugcina kwe-oda lakho. Ngezikhathi zamanje zokuhola sithumele i-imeyili noma ushayele ku-0755-84550616 bese ukhuluma noMmeleli Wokuthengisa.
4. Q: Ngabe amathini e-caviar aphephile yini kwimikhiqizo yokudla? Singayithola incwadi esho ukuthicaviar amathini aphephile ukudla?
A: Amathini kaCaviar ayiphakethe elamukelekayo lemikhiqizo yokudla. Singancoma ukumbozwa kwangaphakathi kwaleyo mikhiqizo ene-asidi noma esekwe emanzini. Sisebenzisa uyinki nokugunyazwa kwe-FDA futhi singanikeza ngemibhalo evela kubahlinzeki bethu. Sihlolisiswa minyaka yonke ngamakhasimende amaningi e-Fortune 500 futhi siqinisekisiwe ukuhlangabezana nezindinganiso eziphakeme zabakhiqizi bamaphakheji wokuxhumana nokudla. Zonke izakhiwo zethu ziyiSQF2 eqinisekiswe yiSafe Quality Food Institute.
Isampula yamahhala, izindleko zokuhambisa ziqoqwa.
Sithembisa ukugcina i-logo yakho nobuciko kuyimfihlo.
Uma ufaka i-oda, sicela ubheke kuhlu olungezansi lwe-MOQ nosayizi ohlukile.
Langaphambilini I-15g-30g-50g-125g-250g ibhokisi le-tin le-caviar elinamabhodlela avaliwe enjoloba
Olandelayo: I-250g ne-500g elula evulekile ye-Caviar Tin Can_Ring yokudonsa amathini
250g futhi 500g okulula evulekile Caviar Tin Can_Ring pul ...
15g-30g-50g-125g-250g cleaner caviar tin box wit ...